Zvikamu muKubva kuLinux
Kubva kuLinux iri rako razvino blog kwaunowana zvese zvinoenderana neLinux nyika. Uye zvakare, sezvo iwe ungangodaro wakabvisa kubva kuzita rayo, iwe unowana zvakare dzidziso, emanyowani uye matipi kuitira kuti iwe ugone kuita chero basa kubva kuLinux, izvo zvinokubatsira iwe kukanganwa nezve mamwe mashandiro esisitimu, kunyanya kana iwe uri "switcher".
Nekuti Google yakasarudza kumisikidza nhare yayo yekushandisa paLinux, iyi blog zvakare ine ruzivo rwakanangana neiyo Android nyika. Nhau dzakaburitswa Kubva Kubva Linux zvakare inounganidza ruzivo rwakanangana nevanhu vakakurumbira muLinux, pakati pavo Linus Torvalds anomira, akagadzira, anovandudza nekuchengetedza kernel yeese Linux system.
Pakati pemashandisirwo atinokurukura mune ino blog tine dhizaini, chirongwa, multimedia maapplication kana, ehe, mitambo. Iwe une runyorwa rweZvikamu zveLinux pazasi. Yedu yekunyora timu iri basa rekuchengetedza nekuvandudza iwo mazuva ese.
Chitarisiko / Kuita munhu
Networks / Maseva
Dzidziso / Mabhuku / Matipi